ဒေသနာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ဓမ်မဟောငျးကမျြး / ဒေသနာ
1:1 ဒေသနာ၏စကား, ဒါဝိဒ်၏သားကို, ဂျေရုဆလင်ရှင်ဘုရင်၏.
1:2 ဒေသနာကပြောပါတယ်: မိစ္ဆာဒိဌိများအချည်းနှီးသော! မိစ္ဆာဒိဌိများအချည်းနှီးသော, လူအပေါင်းတို့သည်အနတ္တဖြစ်၏!
1:3 လူတမိမိကြိုးစားအားထုတ်သမျှထဲကနေမကပိုကဘာလဲ, သူသည်နေအောက်မှာကြိုးစားအားထုတ်အဖြစ်?
1:4 တစ်ဦးကမျိုးဆက်ကွယ်ပျောက်ဖြတ်သန်း, နှင့်မျိုးဆက်ရောက်ရှိ. ဒါပေမယ့်မြေကြီးတပြင်အစဉ်အမြဲရပ်တည်.
1:5 နေရောင်ကိုမြင့်တက်ခြင်းနှင့်စုံ; ၎င်း၏အရပ်မှပြန်လာ, ထိုမှသည်, နောက်တဖန်မွေးဖွားခံရခြင်း,
1:6 ကတောင်ဘက်မှတဆင့် circles, နှင့်မြောက်ဘက်ဆီသို့ပြရန်. ဝိညာဉျတျောအပေါ်ဆက်လက်, ၎င်း၏ဆားကစ်တစ်ခုထဲတွင် illuminating အရာအားလုံးကို, နှင့်၎င်း၏သံသရာမှာထပ်လှည့်.
1:7 အားလုံးမြစ်တို့သည်ပင်လယ်ထဲသို့ဝင်, နှင့်ပင်လယ်လျှံမထားဘူး. မြစ်ထွက်သွားကြရာကနေအရပျသို့, သူတို့ပြန်လာ, သူတို့သည်နောက်တဖန်စီးဆင်းစေခြင်းငှါဒါ.
1:8 ထိုသို့သောအမှုအရာခက်ခဲ; လူကိုစကားနှင့်သူတို့ကိုရှင်းပြနိုင်မဟုတျပါဘူး. အဆိုပါမျက်စိသည်မြင်သဖြင့်စိတ်ကျေနပ်မှုမရဖြစ်ပြီး, မဟုတ်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်မပြည့်စုံနားဖြစ်ပါသည်.
1:9 ကတည်ရှိတော်မူကြောင်းကိုဆိုတာဘာလဲ? အလားတူအနာဂတ်၌တည်ရှိနေရကြလိမ့်မည်. ပြုထားပြီးကြောင်းဆိုတာဘာလဲ? အလားတူအမှုကိုပြုခံရဖို့ကိုဆက်လက်ရကြလိမ့်မည်.
1:10 အသစ်ကဘာမျှမနေအောက်မှာရှိပါတယ်. ပြောနိုင်ပါမည်သူမဆိုမဟုတ်: "အကယ်, ဒီအသစ်ဖြစ်၏!"ဒါဟာပြီးသားကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့မှာဖြစ်ဘူးသောခေတ်ကာလအတွက်ထုတ်ဆောင်လျက်ရှိသည်သည်.
1:11 ယခင်အရာမျှမအောကျမေ့ရရှိပါတယ်. တကယ်ပါပဲ, အတိတ်အရာမဆိုစံချိန်အနာဂတ်၌ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်, အလွန်အဆုံးမှာတည်ရှိပါလိမ့်မယ်သောသူတို့အဘို့.
1:12 ငါ, ဒေသနာ, ယေရုရှလင်မြို့၌ဣသရေလအမျိုး၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်.
1:13 ထိုအခါငါရှာခြင်းနှင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ငါ့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, နေအောက်မှာပြုသမျှတို့ကိုရည်မှတ်. ဘုရားသခငျသညျလူသားတို့အားဤအလွန်ခက်ခဲတာဝန်ပေးတော်မူပြီ, သူတို့ကကသိမ်းပိုက်စေခြင်းငှါဒါ.
1:14 နေအောက်၌ငါပြုသမျှတို့ကိုငါမြင်ပြီ, အကယ်စင်စစ်: အားလုံးအနတ္တနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၏တစ်ဦးခံရသောဆငျးရဲဖြစ်ပါသည်.
1:15 အဆိုပါကောက်သောတညျ့မခံရဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်, နှင့်မိုက်မဲ၏နံပါတ်လက်နက်ဖြစ်၏ဖြစ်ပါသည်.
1:16 ငါသည်ငါ၏နှလုံး၌ပြောပြီ, ဟုဆို: "အကယ်, ငါတန်ခိုးအာနုဘော်အောင်မြင်ပါပြီ, ငါ။ ယေရုရှလင်မြို့၌ငါ့ရှေ့မှာအရှိနသောသူအပေါငျးတို့သညျပညာရှိစံချိန်ကြပါပြီ "ငါ၏စိတ်ကိုအမြော်အမြင်ရှိရှိအရာများစွာကိုစဉ်းစားထားပါတယ်, ငါသင်ယူခဲ့ကြ.
1:17 ထိုအခါငါငါ့နှလုံးအပျနှံခဲ့ကြပါပြီ, ငါသည်သမ္မာသတိနှင့်အယူဝါဒကိုသိစေခြင်းငှါဒါ, လည်းအမှားများနှင့်မိုက်မဲခြင်း. သို့သျောလညျးငါအသိအမှတ်မပြု, ဤအမှုအရာတို့ကိုလည်း, ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလည်းမရှိ, နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၏ဆငျးရဲခွငျး.
1:18 ဒီအတွက်ကြောင့်, အများကြီးပညာအများကြီးအမျက်ဒေါသလည်းရှိပါတယ်. အကြင်သူသည်အသိပညာဖြည့်စွက်, ထို့အပြင်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြည့်စွက်.
2:1 ငါသည်ငါ၏နှလုံး၌ကဆိုပါတယ်: "ငါသည်ပျော်မွေ့လျက်ထွက်သွားနှင့်လျတ်ပါလိမ့်မယ်, ငါ။ ကောင်းသောအမှုအရာပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ် "ထိုအခါငါကဒီကိုငါသိမြင်၏, လွန်း, အနတ္တဖြစ်ပါသည်.
2:2 အရယ်, ငါမှားယွင်းမှုတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစား. နှင့်ဝမ်းမြောက်ရန်, ငါကလည်း: "သင်အဘယ်ကြောင့်လှည့်စားလျက်ရှိသည်, အဘယ်သူမျှမရည်ရွယ်ချက်မှ?"
2:3 ငါစပျစ်ရည်ကိုမှငါ့ဇာတိပကတိ၌ဆုတ်ခွာဖို့ငါ့နှလုံး၌ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ငါသည်ပညာတရား, ငါ၏စိတ်ကိုဆောင်ကြဉ်းအံ့သောငှါဒါ, နှင့်မိုက်မဲခြင်းမှရှောင်သွား, ငါသည်လူများ၏၏သားတို့အဘို့အသုံးဝင်သည်အဘယ်အရာကိုမြင်သည်အထိ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ကနေရောင်အောက်တွင်လုပ်ဖို့်၏, သူတို့ရဲ့အသက်တာ၏ရက်ပေါင်း၏နံပါတ်စဉ်ကာလအတွင်း.
2:4 ငါသည်ငါ့အကျင့်ကိုကျင့်ကိုချီးမြှင့်. ကိုယ်အဘို့ငါအိမ်ကိုဆောက်, ငါစပျစ်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုး.
2:5 ငါဥယျာဉ်များနှင့်ဥယျာဉ်ခြံလုပ်. ထိုအခါငါအမြိုးမြိုးသောသစ်ပင်များနှင့်အတူသူတို့ကိုစိုက်လျက်.
2:6 ထိုအခါငါရေ fishponds ထွက်တူး, ငါကြီးထွားလာသစ်ပင်သစ်တောရေအံ့သောငှါဒါ.
2:7 ကျွန်မယောက်ျားမိန်းမတို့အစေခံကျွန်ရရှိသော, ငါကြီးမြတ်မိသားစုခဲ့, အဖြစ်ကျွဲနွားများ၏နွားများနှင့်သိုး၏အကြီးအသိုးစုများ, ယေရုရှလင်မြို့၌ငါ့ရှေ့မှာအသူအပေါင်းတို့ထက် ကျော်လွန်..
2:8 ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ရွှေငွေအဘို့ဆည်းဖူး, ရှင်ဘုရင်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏စည်းစိမ်. ကျွန်မယောက်ျားမိန်းမတို့အဆိုတော်တွေရှေးခယျြခဲ့, နှင့်လူသားတို့၏သာယာကြည်နူးစရာ, စပျစ်ရည်ကိုလောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖလားနှင့်အိုး.
2:9 ထိုအခါငါခမ်းနားထည်ဝါအတွက်ဂျေရုဆလင်၌ငါ့ရှေ့မှာဖြစ်ဘူးသောသူအပေါင်းတို့ကိုလွန်ကဲ. ငါ့ပညာကိုလည်းငါနှင့်အတူအတည်ကြည်ခြင်း.
2:10 နှင့်ငါ့မျက်စိတပ်မက်လိုချင်သောသောသူအပေါင်းတို့သည်, သူတို့ကိုငါမငွငျးခဲ့ပါ. ငါတိုင်းအပျော်အပါးခံစားမှငါ့နှလုံးတားမြစ်ကိုမရ, ငါပြင်ဆင်သောအမှုအရာမှာသူ့ဟာသူ amusing ထံမှ. ငါသည်ငါ၏ဝေစုအဖြစ်ဤမှတ်, ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ထဲသို့ဝင်၏အသုံးချနေခဲ့ကြပါလျှင်အဖြစ်.
2:11 သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့လက်ကိုဖန်ဆင်းသမျှသောအကျင့်ကိုကျင့်ဆီသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်သည့်အခါ, ငါမပါရည်ရွယ်ချက်မှ perspired ခဲ့သောအတွက်စည်းစိမ်မှ, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအမှုအရာအတွက်အသက်ဝိညာဉ်၏အနတ္တ, ဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်လျှင်, အလျှင်းမနေအောက်မှာအမြဲတမ်းကြောင်း.
2:12 ကျွန်မအပေါ်ဆက်လက်, ပညာတရားကိုစဉ်းစားသကဲ့သို့, အဖြစ်အမှားနှင့်မိုက်မဲခြင်း. "ဘာသူဖြစ်၏,"ငါကလည်း, "ဟုသူကမိမိကိုဖန်ဆင်းသောအတိုင်းလိုက်နာနိုင်လိမ့်မယ်လို့, ဘုရင်?"
2:13 ထိုအခါငါဉာဏ်ပညာကိုမိုက်မဲခြင်းထက်မလွန်ကြောင်းကိုသိမြင်, ဤမျှလောက်သူတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲကနေအလင်းသလောက်ကွဲပြားသောကြောင့်.
2:14 ပညာရှိတစ်ဦး၏မျက်စိတို့သည်သူ၏ဦးခေါင်း၌. တစ်ဦးကမိုက်သောသူသည်မှောင်မိုက်၌သွားလာ. သို့သျောလညျးငါတစျဦးသည်အခြားတူသောကွယ်ပျောက်လိမ့်မယ်လို့လေ့လာသင်ယူ.
2:15 ထိုအကျွန်ုပ်၏နှလုံးထဲမှာကပြောပါတယ်: "မိုက်မဲခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်ဦးစလုံး၏အသေခံခြင်းတဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဆိုပါက, ဘယ်လိုငါ့ကိုအကြိုးရှိပါဘူး, ငါသည်ပညာတရား၏လုပျငနျးပိုမိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေးပြီဆိုပါက?"ထိုအခါငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကိုအတွင်းစကားပြောခဲ့ပါသည်အဖြစ်, ငါဒီရိပ်မိ, လွန်း, အနတ္တဖြစ်ပါသည်.
2:16 ပညာရှိတို့၏အစဉ်ပိုင်အောကျမေ့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေများအတွက်, မမိုက်မဲ၏. နှင့်အနာဂတ်ကြိမ်အတူတူအရာအားလုံးကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်, ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးနှင့်အတူ. အဆိုပါနားမလည်ဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌အဆိုပါသင်ယူသေဆုံး.
2:17 နှင့်, ဒီအတွက်ကြောင့်, ငါ့အသက်ကိုငါ့ကိုပင်ပန်းလှပြီ, နေအောက်၌ငါအရာအားလုံးကိုမကောင်းသောအကြောင်းကိုသိမြင်လျှင်ကတည်းက, နှင့်အရာအားလုံးဗလာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၏တစ်ဦးခံရသောဆငျးရဲဖြစ်ပါသည်.
2:18 နောက်တဖန်အ, ငါငါ့အလိုရှိသမျှကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ကိုရှံမု, ငါကြိုးစားသည်နေအောက်မှာကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သောအားဖြင့်, ငါ့နောက်ကိုအမွေခံခြင်းဖြင့်ဆောင်ယူခြင်းကိုခံရဖို့,
2:19 ငါသူသည်ပညာရှိသောသို့မဟုတ်မိုက်မဲမည်လောမသိသော်လည်း. သို့သော်လည်းသူသည်ငါ၏စည်းစိမ်ကိုကျော်အာဏာကိုရပါလိမ့်မယ်, ငါကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြရသော. ထိုအအရာအားလုံးထက်ဒါဗလာရှိ?
2:20 ထို့ကြောင့်, ငါစဲ, အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသနောက်ထပ်နေရောင်အောက်တွင်အလုပျလုပျစွန့်လွှတ်.
2:21 တစ်စုံတစ်ဦးကပညာကိုကြိုးစားအားထုတ်သောအခါ, ဩဝါဒ, နှင့်သမ္မာသတိ, သူကပျင်းရိသူသည်တဦးတည်းမှရရှိသောအရာနောက်တွင်အရွက်. ဒါကြောင့်ဒီ, လွန်း, အနတ္တကြီးစွာသောဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးသည်.
2:22 ဘယ်လောက်မိမိကြိုးစားအားထုတ်သမျှ, စိတ်ဝိညာဉ်၏ဆငျးရဲခွငျးမှလူတအကျိုးရှိနိုင်ဘို့, သူသည်နေအောက်မှာညှဉ်းဆဲခဲ့သော?
2:23 အားလုံးလက်ထက်တော်တို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနှင့်အခက်အခဲများနှင့်ပြည့်စုံကြပြီ; သူသည်မိမိစိတ်ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေပါဘူးမဟုတ်, ပင်ညဉ့်၌. ဤရွေ့ကား, အနတ္တမဟုတ်ပါဘူး?
2:24 ဒါကြောင့်အစာစားသောက်ခြင်းမှပိုကောင်းမဟုတျပါဘူး, နှင့်မိမိစိတ်ဝိညာဉ်သည်သူ၏စည်းစိမ်၏ကောင်းသောအမှုအရာကိုပြသ? ဤရွေ့ကား, ဘုရားသခင်၏လက်တော်မှဖြစ်ပါသည်.
2:26 ဘုရားသခငျသညျအားပေးတော်မူပြီ, ရှေ့တော်၌ကောင်းသောသူသည်လူ, ဉာဏ်ပညာကို, နှင့်အသိပညာ, နှင့်ဝမျးမွောကျသောစိ. သို့သော်အပြစ်ဖို့, သူခံရသောဆငျးရဲပေးထားသောနှင့်မလိုလားအပ်သောစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်, add မှသကဲ့သို့, နှင့်စုဆောင်းရန်, ကယ်နှုတ်သော, သူ့ကိုအလိုငှါဘုရားသခင်၏အလိုတော်ခဲ့သူ. ဒါပေမဲ့ဒီ, လွန်း, အနတ္တနှင့်စိတ်ကိုတစ်ဦးဆွန်းစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်.
3:1 ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမိမိတို့၏အချိန်ရှိသည်, မိုဃ်းကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောအရာတို့သည်မိမိတို့အကြားကာလအတွင်းမှာဆက်လက်.
3:2 မွေးဖွားခံရဖို့အချိန်, အသေခံရန်နှင့်အချိန်. စိုက်ပျိုးရန်အချိန်, စိုက်သောအရာကိုတက်ဆွဲထုတ်ရန်နှင့်အချိန်.
3:3 သတ်ရသောအချိန်, အနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်းနှင့်အချိန်. မဖြိုမဖျက်ဖို့အချိန်, ဆောရန်နှင့်အချိန်.
3:4 ငိုရသောအချိန်, ရယ်မောဖို့နဲ့အချိန်. ညည်းတွားရသောအချိန်, ကခုန်ရန်နှင့်အချိန်.
3:5 ကျောက်ခဲတို့ကိုအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေရန်တစ်ဦးကအချိန်, စုဆောင်းရန်နှင့်အချိန်. ကိုင်စွဲဖို့အချိန်, ဝေးခှငျထဲကနေဖြစ်ရန်နှင့်အချိန်.
3:6 ရဖို့ရန်အချိန်, ဆုံးရှုံးရန်နှင့်အချိန်. စောင့်ရှောက်ဖို့အချိန်, စွန့်ပစ်ရန်နှင့်အချိန်.
3:7 ဆုတ်ရသောအချိန်, နှင့်အချိန်ချုပ်ရန်. အသံတိတ်ဖြစ်ရသောအချိန်, စကားပြောဆိုရန်နှင့်အချိန်.
3:8 မေတ္တာတော်ကိုတစ်ဦးကအချိန်, မုန်းတီးမှုများနှင့်အချိန်. စစ်ပွဲ၏တစ်ဦးကအချိန်, ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အချိန်.
3:10 ငါသည်ဘုရားသခင်၏လူသားတို့ဖို့အားပေးတော်မူပြီသောဆငျးရဲခွငျးကိုမွငျရပွီ, သူတို့ကကသိမ်းပိုက်စေခြင်းငှါနိုင်ရန်အတွက်.
3:11 သူကသူတို့ရဲ့အချိန်အတွက်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကောင်းသောဖန်ဆင်းတော်မူပြီ, သူကသူတို့ရဲ့အငြင်းပွားမှုများမှကမ္ဘာကြီးကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး, ဒါကြောင့်လူသည်ဘုရားသခင်၏ရှေ့ဦးစွာ မှစ. ဖန်ဆင်းသောအမှုအရှာဖွေတွေ့ရှိမပြုစေခြင်းငှါ, ပင်ကုန်အထိ.
3:12 ထိုအခါငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏ဖို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘာမှမရှိဘူးကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်, နှင့်ယခုဘဝ၌ကောင်းစွာလုပ်.
3:13 ဒီအတှကျဘုရားသခငျထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်: ယောက်ျားတိုင်းစားများနှင့်အချိုရည်သည့်အခါ, နှင့်သူ၏လုပ်အား၏ရလဒ်ကောင်းကိုမြင်.
3:14 ငါသည်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီသမျှသောအမှုတော်တို့ကိုအပေါ်ဆက်လက်သင်ယူကြပါပြီ, အစဉ်ပိုင်. ကျနော်တို့ဘာမှထပ်ထည့်နိုင်မဟုတ်, မဟုတ်သလိုကွာဘာမှယူ, ဘုရားသခငျသညျသူကိုကွောကျရှံ့စေခြင်းငှါနိုင်ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီသောအမှုအရာထဲကနေ.
3:15 အဘယ်အရာကိုလုပ်ထားပြီး, အတူတူဆက်ပြီး. အနာဂတျတှငျကဘာလဲ, ပြီးသားတည်ရှိလျက်ရှိသည်. တဖန်ဘုရားသခင်ကကွယ်လွန်သွားခဲ့ရာပြုပြင်.
3:16 နေအောက်၌ငါကိုငါမြင်၏: အစားတရားစီရင်ရာ, impiety, အစားတရားမျှတမှု, ဒုစရိုကျ.
3:17 ထိုအကျွန်ုပ်၏နှလုံးထဲမှာကပြောပါတယ်: "ဘုရားသခငျသရုံနှင့်မတရားသောသူတို့အတွက်စီရင်မည်, ပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီကိစ္စများအတွက်အချိန်ဖြစ်ရကြမည်။ "
3:18 ငါသည်ငါ၏နှလုံး၌ကဆိုပါတယ်, လူသားတို့အကြောင်းကို, ဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုစမ်းသပ်မယ်လို့, နှင့်သားရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်သူတို့ကိုထုတ်ဖေါ်.
3:19 ဒီအတွက်ကြောင့်, အဆိုပါဝေးလူ၏နှင့်တိရစ္ဆာန်ဖြတ်သန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်နှစ်ဦးစလုံး၏အခြေအနေနှင့်ညီမျှသည်. လူတဦးသေဆုံးသည်, ဒါကြောင့်လည်းသူတို့သေဆုံးကြဘူး. ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအလားတူရှူ, လူတိရစ္ဆာန်တို့ကိုထက်ပိုဘာမျှရှိပါတယ်; ဤသူအပေါင်းတို့အဘို့အချည်းနှီးမှဘာသာရပ်များမှာ.
3:20 နှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုတစ်နေရာတည်းမှအပေါ်ကိုဆက်လက်; မြေကြီးတပြင်ကနေအဘို့သူတို့လုပ်ခဲ့ကြသည်, နှင့်မြေကြီးတိုင်အောင်သူတို့အတူတူပြန်လာကြလိမ့်မည်.
3:21 အာဒံ၏သားတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်အထက်သို့တက်လျှင်ကားအဘယ်သူသိတယ်, နှင့်တောသားရဲ၏ဝိညာဉ်ကိုအောက်ဖက်ဆင်းလျှင်?
3:22 ငါသည်သူ၏အလုပ်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမှလူထက်ပိုကောင်းလိမ့်ဘာမှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ: ဒီအတှကျမိမိအဘို့ဖြစ်ပါသည်. ထိုအသောသူကိုထည့်သွင်းရကြလိမ့်မည်, သူကသူ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လတံ့သောအရာတို့ကိုသိစေခြင်းငှါဒါ?
4:1 ငါကအခြားအမှုအရာမှကိုယ့်ကိုကိုယ်လှည့်, ငါနေရောင်အောက်တွင်ထွက်သယ်ဆောင်ထားတဲ့မိစ္ဆာစွပ်စွဲချက်တွေကိုမြင်လျှင်, အပြစ်မရှိနှင့်မျက်ရည်, သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်အဘယ်သူမျှမရှိကွောငျးကို; သူတို့အကြမ်းဖက်မှုများကိုဆီးတားခြင်းငှါမတတ်နိုင်ခဲ့, အားလုံးအကူအညီနဲ့၏ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်ခြင်း.
4:2 ဆိုတော့, ငါလူနေမှုထက်သေလွန်သောသူတို့သည်ပိုပြီးချီးကျူးထောပနာ.
4:3 ထိုနှစ်ခုလုံးထက်ပိုပြီးပျော်ရွှင်, သူ့ကိုငါဖြစ်စစ်ကြောစီရင်, သေးသူကိုဘွားမြင်ခြင်းကိုခံမထားပါဘူး, သူမရှိသေးပါနေအောက်မှာပြုလေသောဘေးမမြင်ရပြီ.
4:4 နောက်တဖန်အ, ငါသည်လူအပေါငျးတို့သစည်းစိမ်စဉ်းစားခဲ့သည်. ငါသည်လည်းသူတို့၏ကြိုးပမ်းသူတို့၏အိမ်နီးချင်းများ၏ငြူစူခြင်းမှပွင့်လင်းဖြစ်ကြောင်းအသိပေးစာကိုယူ. ဆိုတော့, ဤသည်၌, လွန်း, အနတ္တနှင့်အပိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိ.
4:5 အဆိုပါမိုက်သောသူအတူတကွသည်မိမိလက်ကိုခြံ, မိမိဇာတိပကတိ၌စားသုံး, ဟုဆို:
4:6 "ကြွင်းသောအရာနှင့်အတူတစ်ဦးကလက်တဆုပ်စာစည်းစိမ်နှင့်ဝိညာဉ်ခံရသောဆငျးရဲနှငျ့ပွညျ့စုံနှစ်ဦးစလုံးတို့သည်လက်ထက် သာ. ကောင်း၏။ "
4:7 ဒီစဉ်းစားနေချိန်တွင်, ငါသည်လည်းနေရောင်အောက်တွင်အခြားအနတ္တရှာဖွေတွေ့ရှိ.
4:8 သူတစျဦးဖွစျသညျ, သူကဒုတိယရှိသည်ပါဘူး: သူတို့ကမဟုတျပါ, အဘယ်သူမျှမအစ်ကို. သို့သော်လည်းသူလုပ်သည်ငြိမ်းပါဘူး, မဟုတ်သလိုသူ့မျက်စိစည်းစိမ်နှင့်ကျေနပ်မှုရှိပါသလဲ, မဟုတ်သူရောင်ပြန်ဟပ်ပါဘူး, ဟုဆို: "အဘယ်သူကိုငါကောင်းသောအရာကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျလုပ်အားနှင့်ခိုးဘူး?"ဒီခုနှစ်တွင်, လွန်း, အနတ္တနှင့်အများဆုံးခဲဆငျးရဲခွငျးဖွစျပါသညျ.
4:9 ထို့ကြောင့်, နှစ်ခုအတူတကွဖြစ်သည် သာ. ကောင်း၏, တယောက်တည်းသောသူဖြစ်ရန်အဘို့အထက်. သူတို့အဖော်များ၏အားသာချက်ရှိသည်.
4:10 တဦးတည်းရေတံခွန် အကယ်., သူကတခြားကထောက်ခံရကြလိမ့်မည်. တစ်ဦးတည်းသောသူတဦးတည်းမင်္ဂလာရှိ၏. သူလဲသောအခါများအတွက်, သူကသူ့ကိုချီကြွရန်အဘယ်သူမျှမရှိတယ်.
4:11 နှစ်ယောက်အိပ်လျှင်, နွေးအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်သူတို့. ဘယ်လိုတစ်ဦးတည်းလူတစ်ဦးနွေးနိုင်ပါတယ်?
4:12 ထိုအခါလူသည်တဦးတည်းဆန့်ကျင်နိုင်နိုင်လျှင်, နှစ်ယောက်ဆီးတားနိုင်စေခြင်းငှါ, ကာသုံးလှနျးတငျကြိုးအခက်အခဲနှင့်အတူကျိုးသည်.
4:13 ပိုကောင်းမယ့်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်, ဆင်းရဲသောသူကိုပညာရှိ, ရှငျဘုရငျကိုထက်, အဟောင်းနှင့်မိုက်မဲ, အဘယ်သူသည်သားစဉ်မြေးဆက်၏မျက်နှာကို ထောက်. ရှေ့သို့ကြည့်ဖို့မသိရပါဘူး.
4:14 တစ်ခါတစ်ရံတွင်အဘို့, တဦးတည်းအကျဉ်းထောင်များနှင့်ကြိုးထဲကထွက်သွားသည်, နိုငျငံမှ, အခြားအနေဖြင့်, ဘုရငျ့အာဏာမွေးဖွား, လိုအပ်ချက်များကမဖျက်ဆီးနေသည်.
4:15 နေအောက်၌ငါလမ်းလျှောက်နေသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်သိမြင်လျှင်, ငါလာမယ့်မျိုးဆက်ကိုမြင်လျှင်, သူတို့အရပ်တွင်ထလိမ့်မည်.
4:16 လူများ၏အရေအတွက်မှာ, ဤအမတိုင်မီတည်ရှိသောသူအပေါင်းတို့ထဲက, လက်နက်ဖြစ်၏ဖြစ်ပါသည်. ထိုနောကျမှတည်ရှိပါလိမ့်မယ်တဲ့သူတွေကိုသူတို့အား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိရမည်မဟုတ်. ဒါပေမဲ့ဒီ, လွန်း, အနတ္တနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၏တစ်ဦးခံရသောဆငျးရဲဖြစ်ပါသည်.
4:17 သင်၏ခြေကိုစောငျ့ရှောကျ, သငျသညျဘုရားသခငျ၏အိမျသို့ခြေလှမ်းလာသောအခါ, နှင့်ချဉ်းကပ်, သငျသညျနားမထောငျစခွေငျးငှါဒါ. နာခံမှုအဘို့အမိုက်သောယဇ်ထက်အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ပါသည်, သူတို့လုပ်နေတာသောဘေးဥပဒ်ကိုမသိသောသူ.
5:1 သငျသညျကိုကျယ်ကျယ်ဘာမှမပြောသင့်ပါတယ်, မဟုတ်သင်၏နှလုံးသညျဘုရားသခငျရှေ့တျော၌စကားလုံးတင်ဆက်ဖို့အလျင်စလိုဖြစ်သင့်. ဘုရားသခင်အဘို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်, သငျတို့သညျမွကွေီးပျေါများမှာ. ဒီအတွက်ကြောင့်, သင်၏စကားအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါစေ.
5:2 အိပ်မက်များအများအပြားစိုးရိမ်ပူပန်အတိုင်းလိုက်နာ, နှင့်များစွာသောစကားအတွက်မိုက်မဲခြင်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မည်.
5:3 သငျသညျဘုရားသခငျအားဘာမှကတိပြုကြလျှင်, သင်ကပြန်ဆပ်ဖို့နှောင့်နှေးမနေသင့်. သမျှကိုသင်ကတိပြုကြပါပြီ, ကဆပ်. သို့သော်တစ်ဦးသစ္စာမဲ့ခြင်းနှင့်မိုက်မဲသောဂတိတော်ကိုသူ့ကိုမနှစ်သက်သော.
5:4 ထိုသို့သစ္စာစေခြင်းငှါမအများကြီး သာ. ကောင်း၏, ထက်, သစ်စာဂတိပွုပွီးနောကျ, ကတိထားတော်ခဲ့ရာဖြည့်ဆည်းဖို့မ.
5:5 သင်တို့အသားကိုဖြစ်ပေါ်စေသကဲ့သို့သင်တို့သည်အပြစ်တရားမှသင်၏နှုတ်ကိုမသုံးသင့်တယ်. တဖန်သင်တို့မပြောသင့်ပါတယ်, တစ်ခုအိန်ဂျယ်တို့မျက်မှောက်၌,, "မ Providence ရှိပါသည်။ " ဘုရားသခသည်, သင်၏စကားမှာအမျက်ထွက်ဖြစ်ခြင်း, သင်၏လက်၌ရှိသမျှသောအကျင့်ကိုကျင့်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေခြင်းငှါ.
5:6 အများအပြားအိပ်မက်ရှိတယ်ဘယ်မှာ, အများအပြားမိစ္ဆာဒိဌိအားနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောစကားလုံးများကိုရှိပါတယ်. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သငျသညျဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရပါမည်.
5:7 သင်ဆင်းရဲသောတဘက်၌မမှန်သောစွပ်စွဲချက်တွေကိုမြင်ရပါလျှင်, နှင့်အကြမ်းဖက်စီရငျခကျြ, အစိုးရကနှင့် subverted တရားမျှတမှုကို, ဤအခြေအနေအပေါ်အံ့အားသင့်ဖြစ်ပါဘူး. မြင့်သောအရပ်ထဲမှာသူတို့အဘို့ပိုမိုမြင့်မားနေသောအခြားသူများကများ, နှင့်အခြားသူများနေဆဲရှိပါတယ်, ပိုပြီးထင်ပေါ်ကျော်ကြား, ဤအကျော်.
5:8 သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်, တစ်ခုလုံးမြေကြီးတပြင်အုပ်စိုးသူဘုရင်ကလည်းမရှိ, သူ့ကိုမှဘာသာရပ်ဖြစ်သော.
5:9 တစ်ဦးကလောဘကြီးလူကိုပိုက်ဆံအားဖြင့်ကျေနပ်မည်မဟုတ်ပါ. အကြင်သူသည်ဥစ္စာစည်းစိမ်ကိုချစ်သောသူကနေအသီးမသီးအသီးအနှံကိုရိတ်ရကြလိမ့်မည်. ထို့ကြောင့်, ဤ, လွန်း, အနတ္တဖြစ်ပါသည်.
5:10 များစွာသောစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိပါတယ်ဘယ်မှာ, ထို့အပြင်ဤအရာတို့ကိုလောင်ပါဖို့အများကြီးရှိပါလိမ့်မည်. ဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူတဦးတည်းအကြိုးရှိပါဘူး, မိမိမျက်စိနှင့်စည်းစိမ်တို့ကိုသိကြောင်း မှလွဲ.?
5:11 အိပ်စက်ခြင်းအလုပ်လုပ်တယ်တဲ့သူတစျဦးမှသည်ချို၏, သူကအနည်းငယ်သို့မဟုတ်အများကြီးစားသုံးရှိမရှိ. ဒါပေမယ့်ချမ်းသာတဲ့ယောက်ျား၏ satiation အိပ်ပျော်ခြင်းမှသူ့ကိုခွင့်မပြုပါလိမ့်မယ်.
5:12 ပင်အခြားအများဆုံးခဲအားနည်းခြင်းအဖြစ်ရှိပါသည်, အရာနေအောက်၌ငါမြင်ကြပြီ: စည်းစိမ်ဥစ္စာပိုင်ရှင်၏အန္တရာယ်မှထားရှိမည်.
5:13 သူတို့တစ်တွေအများဆုံးကြမ်းတမ်းသောဆင်းရဲခံရသောအခါပျောက်ဆုံးသွားကြသည်များအတွက်. သူကသားကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်, သူအစွမ်းကုန်ခိုကိုးရာမဲ့၌ဖြစ်လိမ့်မည်.
5:14 သူကသူ့မိခင်ရဲ့အမိဝမ်းထဲကထွက်အဝတ်အချည်းစည်းသွားလေ၏သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်သူပြန်လာကြလိမ့်မည်, မိမိစည်းစိမ်ထဲကနေသူ့ကိုနှင့်အတူဘာမျှမယူကြမည်.
5:15 ထိုသို့အနေနဲ့ရှင်းရှင်းစိတ်ဆင်းရဲအားနည်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ပါသည်, သူရောကျပွီကဲ့သို့တူညီသောထုံးစံ၌, ဒါကြောင့်သူပြန်လာကြလိမ့်မည်. ထိုသို့ဆိုသော်အဘယ်သို့သူ့ကိုအကြိုးရှိပါဘူး, သူသည်လေကိုအဘို့ကြိုးစားအားထုတ်ထားပါတယ်ကတည်းက?
5:16 သူစားသုံးသူ၏အသက်တာ၏နေ့ရက်ရှိသမျှ: မှောင်မိုက်၌, များစွာသောစိုးရိမ်ပူပန်နှင့်အတူ, နှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲ၌ရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်ဝမ်းနည်းမှု.
5:17 ဆိုတော့, ဤအမှုသည်ငါ့ကောင်းသလိုပဲဖြစ်ပါတယ်: ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကို စား. သွန်းလောင်းသင့်ကြောင်း, နှင့်သူ၏လုပ်အား၏အသီးအပွရရှိခံစားသင့်, သူသည်နေအောက်မှာကြိုးစားအားထုတ်သောအတွက်, ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုအားပေးတော်မူပြီသူ၏အသက်တာ၏ကာလ၏အရေအတွက်. ဒီအတှကျမိမိအဘို့ဖြစ်ပါသည်.
5:18 ဤရွေ့ကား, ဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်: ဘုရားသခင်မှအသီးအသီးဥစ္စာဓနနှင့်အရင်းအမြစ်များပေးထားတဲ့, အဘယ်သူကိုမှသူသည်ဤလောင်နိုင်စွမ်းပေးသနားခဲ့ပါသည်, မိမိအဘို့ကိုခံစားစေခြင်းငှါ, နှင့်သူ၏စည်းစိမ်အတွက်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ.
5:19 ပြီးတော့သူကအပြည့်အဝသူ၏အသက်တာ၏ကာလကိုအောက်မေ့မည်မဟုတ်, ဘုရားသခင့ပျော်မွေ့နှင့်အတူသူ၏စိတ်နှလုံးယူထားသောဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
6:1 အခြားမကောင်းသောအလည်းရှိပါသည်, အရာနေအောက်၌ငါမြင်ကြပြီ, နှင့်, တကယ်ပါပဲ, ဒါကြောင့်လူတို့တွင်မကြာခဏဖြစ်ပါသည်.
6:2 ဘုရားသခင်ကဥစ္စာဓနပေးတော်မူပြီဘယ်သူကိုမှတစ်ဦးသောသူသည်, နှင့်အရင်းအမြစ်များ, ဂုဏ်အသရေ; သူလိုကြောင်းနှင့်ထဲကအားလုံး, ဘာမျှမသူ၏ဘဝမှချို့တဲ့သော; သေးဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုဤအရာတို့ကိုလောင်နိုင်စွမ်းပေးသနားတော်မူပါဘူး, ဒါပေမယ့်အစားသူစိမ်းသူသည်လူတသူတို့ကိုတို့ကိုလောင်စေမည်. ဒါကအနတ္တနဲ့တစ်ဦးအကြီးအကံမကောင်းဖြစ်ပါသည်.
6:3 လူတတရာကလေးများထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်လျှင်, နှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ရန်, နှင့်နေ့ရက်များစွာတစ်ခုအသက်အရွယ်မှီဖို့, နှင့်မိမိစိတ်ဝိညာဉ်သည်သူ၏အရင်းအမြစ်များ၏ကုန်ပစ္စည်းများမရှိအသုံးပြုမှုကိုအောင်ဖြစ်လျှင်, သူတောင်သင်္ချိုင်းချို့တဲ့ခဲ့ကြပါလျှင်: ထိုကဲ့သို့သောယောက်ျားသည်ကိုရည်မှတ်, ကျွန်မကိုယ်ဝန်မဆောင်သောကလေးကသူထက် သာ. ကောင်း၏ကြောင်းကြေညာ.
6:4 သူကတစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်မပါဘဲရောက်ရှိသူသည်မှောင်မိုက်ထဲသို့အပေါ်ဆက်လက်များအတွက်, သူ၏နာမပျောက်သုတ်ခံရကြလိမ့်မည်, ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးသို့.
6:5 သူသည်နေပူမမြင်ရပြီ, မဟုတ်ကောင်းမကောင်းကိုမကောင်းသောအကြားကွာခြားချက်ကအသိအမှတ်ပြု.
6:6 သူနှစ်ဦးကိုအနှစ်တထောင်ပတ်လုံးအသက်ရှင်ရကြ၏ရင်တောင်, သို့သော်လည်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ကောင်းသောအရာကိုမမွေ့, တူညီသောနေရာအရပ်မှပေါ်အသီးအသီးအလျင်မ?
6:7 လူကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအလုပ်သမားသည်သူ၏ပါးစပ်အဘို့ဖြစ်၏, သို့ရာတွင်သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြည့်ဝကြလိမ့်မည်မဟုတ်.
6:8 ပညာရှိတို့၏မိုက်မဲထက်ပိုသောအရာကဘာလဲရှိဘူး? ထိုအခါ pauper အဘယျသို့ရှိပေ, ထိုအရပျမှအပေါ်ကိုဆက်လက် မှလွဲ., ဘယ်မှာဘဝလည်းမရှိ?
6:9 သငျသညျအလိုရှိကြသည်တွင်အဘယ်အရာကိုမြင်မှပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်, သငျသညျမသိနိုငျသောအရာကိုအလိုရှိကြသည်ဖို့ထက်. ဒါပေမဲ့ဒီ, လွန်း, အနတ္တစိတ်ဝိညာဉ်၏ယူဆဖြစ်ပါသည်.
6:10 အနာဂတ်၌အကြင်သူသည်ရကြလိမ့်မည်, သူ၏နာမကိုပြီးသားကိုခေါ်ထားပြီး. ထိုယောက်ျားသည်ကြောင်းကို သိ. သူသညျမိမိထက်တန်ခိုးကြီးသောသူသည်တဦးတည်းဆန့်ကျင်တရားစီရင်ခြင်းဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပေးနိုင်မဟုတျကွောငျးဖြစ်ပါတယ်.
6:11 များစွာသောစကားရှိပါတယ်, ဤများစွာသော, အငြင်းပွားမှုများအတွက်, အများကြီးအနတ္တကိုင်.
7:1 လူတကိုယ်ကိုကိုယ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအရာတို့ကိုရှာအံ့သောငှါအဘို့အဘယ်ကြောင့်လိုအပ်, သူသည်မိမိအသက်တာ၌ကိုယ်တော်အဘို့အကျိုးရှိသည်အဘယ်အရာကိုသိမထားဘူးသည့်အခါ, မိမိအတည်းခိုခြင်းငှါ, လကျထကျ၏နံပါတ်စဉ်ကာလအတွင်း, နှင့်အချိန်တစ်ဦးအရိပ်ကဲ့သို့အနေဖြင့်ဖြတ်သန်းနေစဉ်? သို့မဟုတ်သူသည်နေရောင်အောက်၌လူနောက်မှာအနာဂတ်၌ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုသူ့ကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မည်?
7:2 တစ်ဦးကနာမည်ကောင်းနံ့သာဆီထက် သာ. ကောင်း၏, နှင့်သေခြင်း၏တစ်ရက်ကလေးမွေးဖွားတဲ့နေ့ကထက် သာ. ကောင်း၏.
7:3 စိတ်မသာညည်းတွားရာအိမျကိုသှားဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်, ပွဲခံသောအိမ်တအိမ်ထက်. ယခင်အတွက်, ငါတို့ရှိသမျှသည်အမှုအရာ၏အဆုံးနှင့် ပတ်သက်. ဤသို့သတိပေးခဲ့ကြပါသည်, ဒါကြောင့်အသက်ရှင်သောအနာဂတ်ကာလ၌ဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယျသို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြောင်း.
7:4 အမျက်ဒေါသပြုံးရယ်ခြင်းထက် သာ. ကောင်း၏. မျက်နှာညှိုးငယ်မှတဆင့်များအတွက်, တော့လို့တဲ့သူတစျဦး၏ဝိညာဉျကိုကိုဆုံးစေခြင်းငှါ.
7:5 ပညာရှိတို့၏နှလုံးစိတ်မသာညည်းတွားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, နှင့်မိုက်မဲ၏စိတ်နှလုံးဝမ်းမြောက်၏နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါသည်.
7:6 ပညာရှိတဲ့လူကိုဆုံးခံရဖို့ပိုကောင်းဒါဟာဖြစ်ပါသည်, မိုက်သောမိစ္ဆာခြီးမှမျးခွငျးအားဖွငျ့လှည့်ဖြားခံရဖို့ထက်.
7:7 အကြောင်းမူကား,, အိုးအောက်ကိုမီးရှို့၌ဆူးပင်၏ crackling နဲ့တူ, ဒါကြောင့်မိုက်မဲ၏ရယ်မောခြင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမဲ့ဒီ, လွန်း, အနတ္တဖြစ်ပါသည်.
7:8 မမှန်သောစွပ်စွဲပညာရှိသောသူကိုနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်သူ၏စိတ်နှလုံး၌ခွန်အား saps.
7:9 တစ်မိန့်ခွန်း၏အဆုံးသည်အစအဦးထက် သာ. ကောင်း၏. သည်းခံခြင်းမောက်မာထက် သာ. ကောင်း၏.
7:10 လျင်မြန်စွာအမျက်ဒေါသသို့ပြောင်းရွေ့ခံရမနေပါနဲ့. ဒေါသအမျက်သည်မိုက်မဲ၏အကြောနေထိုင်.
7:11 သငျသညျမပြောသင့်ပါတယ်: "သင်သည်အဘယ်သို့ထင်ကြဘူးယခင်အချိန်များအခုသူတို့ဖြစ်ကြသည်ထက်ပိုကောင်းပါသောအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်?"ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဤအမျိုးအစားသည်မိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏.
7:12 စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့်အတူဥာဏ်ပညာသည်ပိုမိုအသုံးဝင်နှင့်ပိုပြီးအကျိုးရှိဖြစ်ပါသည်, နေကိုမြင်သောသူတို့အဘို့.
7:13 ဉာဏ်ပညာကိုကာကွယ်ပေးသည်သကဲ့သို့, ဒါကြောင့်လည်းငွေကိုကာကွယ်ပေးပါဘူး. ဒါပေမယ့်သင်ယူမှုနဲ့ဉာဏ်ပညာကဒီအများကြီးပိုရှိသည်: သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတစျဦးမှဘဝပေးသနားတော်မူကြောင်း.
7:14 ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့ကိုစဉ်းစားပါ, အဘယ်သူမျှမကသူမထီမဲ့မွငျပွုထားပါတယ်အကြင်သူ၏ပြင်ပေးနိုင်ကြောင်း.
7:15 ကောင်းသောအချိန်များမှာတော့, ကောင်းသောအမှုအရာပျော်မွေ့, ဒါပေမယ့်တစ်ခုဆိုးယုတ်သောအချိန်သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်. ဘုရားသခငျသညျတစျဦးတည်ထောင်ရန်ရှိပါတယ်နည်းတူများအတွက်, ထိုနည်းတူအခြား, ယောက်ျားသည်သူ့ကိုဆန့်ကျင်မဆိုဖွင့်တိုင်ကြားခြင်းကိုမတှေ့စေခြင်းငှါနိုင်ရန်အတွက်.
7:16 ငါသည်လည်းဤသူကိုမြင်လျှင်, ကြှနျတေျာ့အချည်းနှီးတို့လက်ထက်၌: မိမိအတရားမျှတမှုအတွက်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်သောတစ်ရုံလူကို, တစ်ခုနှင့်မတရားသောသူတို့အတွက်သောသူသည်မိမိငြိုးအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်နေ.
7:17 အလွန်အမင်းပဲဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမနေပါနဲ့, လိုအပ်ပါကထက်ပိုပြီးပညာရှိဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါဘူး, သငျသညျမိုဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်..
7:18 အကြီးအ impiety နှင့်အတူပြုမူမနေပါနဲ့, မိုက်သောဖြစ်ဖို့ရွေးချယ်ကြဘူး, သင်သည်သင်၏အချိန်မတိုင်မီသေဆုံးမည်ကို စိုးရိမ်..
7:19 သင်တစ်ဦးမယ့်လူကိုထောကျပံ့ဖို့အတှကျအကောငျး. ထို့အပွငျ, သငျသညျအထံတော်ကသင်၏လက်ကိုရုပ်သိမ်းပေးရန်မနေသင့်, ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူမည်သည်ကားများအတွက်, ဘာမျှမဂရုမစိုက်ဘူး.
7:21 ဒါပေမယ့်မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအဘယ်သူမျှမဖွင့်ယောက်ျားသည်လည်းမရှိ, အဘယ်သူသည်ကောင်းသောမပြစ်မှားပါဘူး.
7:22 သို့ဖြစ်., စကားပြောသောစကားလုံးရန်သင့်နှလုံးပူးတွဲပါဘူး, ဖြစ်ကောင်း စိုးရိမ်. သင်၏နေမကောင်းစကားပြောကိုယ်တော်၏ကျွန်နားထောင်မည်အကြောင်း.
7:23 သင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အဘို့အသင်သိတယ်, လွန်း, ထပ်တလဲလဲတခြားသူတွေရဲ့မကောင်းသောအပြောပြီ.
7:24 ငါသည်ပညာတရားအတွက်အရာအားလုံးစုံစမ်းပြီ. ငါကလည်းပါပြီ: "ငါသည်။ ပညာရှိသောသူဖြစ်လိမ့်မည်" ပညာသည်ငါ့ထံမှဝေးကွာနုတ်ထွက်,
7:25 ဒါဟာရှေ့ထက်အရမ်းပိုပြီး. ဥာဏ်ပညာသည်အလွန်လေးနက်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သူထုတ်ဖေါ်ရကြလိမ့်မည်?
7:26 ငါ့ဝိညာဉ်အတွက်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုလေ့လာခဲ့ကြ, ငါသိစေခြင်းငှါဒါ, နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစား, နှင့်ဉာဏ်ပညာနှင့်အကြောင်းပြချက်မှထွက်ရှာအံ့သောငှါ, ငါမိုက်မဲသောများ၏ impiety အသိအမှတ်ပြုရန်စေခြင်းငှါဒါ, အဆိုပါ imprudent နှင့်အမှား.
7:27 ထိုအခါငါသေခြင်းထက် သာ. ခါးအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ: သူမတစ်ဦးမုဆိုး၏ကျော့ကွင်းနှင့်အဘယ်သူတူ, နှင့်အဘယ်သူ၏နှလုံးပိုက်ကွန်ကဲ့သို့ဖြစ်၏, သူ၏လက်၌ချည်နှောင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. အကြင်သူသည်ဘုရားသခငျနှသူမ၏ထံမှပြေးကြလိမ့်မည်. သို့သော်မည်သူမဆိုအပြစ်ရှိသောသူဖြစ်ပါသည်သူမ၏ဖမ်းဆီးခံရကြလိမ့်မည်.
7:28 အကယ်, ဒေသနာကပြောပါတယ်, ငါသည်ဤအမှုအရာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ, တခုပြီးတခု, ငါရှင်းပြချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိအံ့သောငှါနိုင်ရန်အတွက်
7:29 အရာကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျနေဆဲရှာကြံနှင့်မတွေ့ရှိထားပါတယ်. တစ်တထောင်တို့တွင်တယောက်သောသူ, ငါတွေ့ပြီ; ထိုသူအပေါင်းတို့အကြားအမျိုးသမီးတစ်ဦး, ငါမတွေ့.
7:30 ဤသည်တစ်ဦးတည်းငါရှာဖွေတွေ့ရှိပြီ: ဘုရားသခင်သည်လူဖြောင့်မတ်စေ, သို့သော်လည်းသူကမရေမတွက်နိုင်သောမေးခွန်းများကိုနှင့်အတူမိမိကိုမိမိနှင့်ရောနှောထားပါတယ်. အဘယ်သူသည်ပညာရှိသောသူကဲ့သို့ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောဖြစ်ပါသည်? သူစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ထားပါတယ်?
8:1 လူ၏သူ၏ပညာမျက်နှာပျက်ထွန်းလင်း, နှင့်သြဇာအရှိဆုံးလူသား၏ပင်ဟူသောအသုံးအနှုနျးကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်.
8:2 ငါရှင်ဘုရင်၏ပါးစပ်နာ, နှင့်ဘုရားသခင်အားကျိန်ဆို၏ပညတ်တော်.
8:3 သငျသညျအလငျြအထံတော်မှဆုတ်ခွာမနေသင့်, မဟုတ်သလိုသင်တစ်ဦးသည်မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုး၌ဆက်လက်ရှိနေသင့်တယ်. သူ့ကိုနှစ်သက်သမျှသောသူတို့အဘို့, သူကပြုကြလိမ့်မည်.
8:4 နှင့်သူ၏စကားလုံးအခွင့်အာဏာနှင့်ပြည့်စုံသည်. သူ့ကိုအားဆင့်ဆိုရမည်မှာနိုင်သူမည်သူမဆိုသည်မဟုတ်လော: "သင်ကဤလမ်းသရုပ်ဆောင်နေကြတယ်အဘယ်ကြောင့်?"
8:5 အကြင်သူသည်ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်မကောင်းသောအတွေ့ကြုံခံစားမည်မဟုတ်. ပညာရှိတစ်ဦး၏စိတ်နှလုံးတုံ့ပြန်ရန်အချိန်ကိုနားလည်နိုင်.
8:6 နေ့စဉ်ကိစ္စများအတွက်, အချိန်နှင့်အခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ, အဖြစ်အများအပြားအခက်အခဲများ, ယောက်ျားသည်.
8:7 သူကအတိတ်ကာလ၏မသိဘဲသည်, သူတမန်အားဖွငျ့အနာဂတ်မှာ၏ဘာမျှမသိရန်နိုင်.
8:8 ဒါဟာဝိညာဉျကိုတားမြစ်ဖို့ယောက်ျား၏တန်ခိုးအားဖြင့်မဟုတ်ပါဘူး, မဟုတ်သူသည်သေမင်း၏တစ်နေ့တာအုပ်စိုးကြပါဘူး, မဟုတ်သူစစ်ထွက်ချိုးရသောအခါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသည်, မမတရားသောသူတို့အတွက်ကယ်တင် impiety ပါလိမ့်မယ်.
8:9 ကျွန်မဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြ, ငါနေအောက်မှာပြုလျက်ရှိသည်သမျှသောအကျင့်ဖို့ငါ့နှလုံးလျှောက်ထားကြပါပြီ. တခါတရံမှာတယောက်သောသူကသူ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ရန်နောက်ထပ်အုပ်စိုး.
8:10 ငါသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံမတရားသောသူတို့အတွက်မြင်ကြပြီ. ဤရွေ့ကားအတူတူပင်, သူတို့အသက်ရှင်သေးစဉ်တွင်, သန့်ရှင်းရာဌာန၌ရှိ, သူတို့တရားမျှတမှုလုပ်သားများအဖြစ်တမြို့လုံးအတွက်ချီးကျူးထောပနာခဲ့ကြ. ဒါပေမဲ့ဒီ, လွန်း, အနတ္တဖြစ်ပါသည်.
8:11 လူသားတို့အဘို့ကိုမဆိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲဘေးကျူးလွန်, တရားသဖြင့်စီရင်ထိုဘေးဥပဒ်ဆန့်ကျင်လျင်မြန်စွာအသံထွက်မဟုတ်သည်ကို ထောက်..
8:12 သို့သော်အပြစ်ရှိသောသူသည်ကိုယ်တိုင်၏မကောင်းသောအတရာကြိမ်ပြုစေခြင်းငှါပေမဲ့, နှင့်သည်းခံခြင်းအားဖြင့်နေဆဲသည်းခံရ၏, ငါကဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နှင့်အတူကောင်းစွာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုနားလည်သဘောပေါက်, သူ၏မျက်နှာကြောက်ရွံ့သောသူသည်.
8:13 ဒါကြောင့်, ကမတရားသောသူတို့အတွက်နှင့်အတူကောင်းစွာမသွားစေခြင်းငှါ, နှင့်သူ၏နေ့ရက်ကာလရွေ့မရစေခြင်းငှါ. ထိုအခါထာဝရအရှင်၏မျက်နှာကိုမကြောက်တဲ့သူတွေကိုတစ်ဦးအရိပ်ကဲ့သို့အကွယ်ပျောက်ပါစေ.
8:14 အခြားအချည်းနှီးလည်းရှိပါတယ်, မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအမှုကိုပြုထားတဲ့. အဆိုပါဖွင့်ရှိပါတယ်, အဘယ်သူကိုမှဘေးဖြစ်ပျက်, သူတို့မတရားသောသူတို့အတွက်၏အကျင့်လုပ်ခဲ့သော်လည်းအဖြစ်. ထိုအခါမတရားသောသူတို့အတွက်ရှိပါတယ်, အလွန်လုံခြုံနေသော, သူတို့ကပဲ၏အကျင့်အားအပိုင်သော်လည်းအဖြစ်. ဒါပေမဲ့ဒီ, လွန်း, ကျွန်မအလွန်ကြီးသောအချည်းနှီးဖြစ်စစ်ကြောစီရင်တော်မူ.
8:15 ဆိုတော့, ငါဝမ်းမြောက်ချီးကျူးထောပနာ, နေရောင်အောက်၌လူအဘို့ကောင်းသောအရာမရှိသောကြောင့်, စားရန် မှလွဲ. နှင့်သောက်စရာ, နှင့်ချိုသောဖြစ်, သူသည်မိမိအသက်တာ၏နေ့ရက်ကာလ၌မိမိကြိုးစားအားထုတ်ရာမှသူနှင့်အတူဘာမျှမယူစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်, ဘုရားသခငျသညျနေရောင်အောက်တွင်သူ့ကိုအားပေးတော်မူပြီဖြစ်သော.
8:16 ထိုအခါငါငါ့နှလုံးလျှောက်ထား, ငါသည်ပညာတရားကိုသိစေခြင်းငှါဒါ, ငါမြေကြီးပေါ်မှာလှည့်ကျတဲ့နှောင့်အယှက်ကိုနားလည်စေခြင်းငှါဒါ: ဒါကြောင့်တစ်ဦးသောသူသည်, မျက်စိတော်နှင့်အဘယ်သူမျှမအိပ်စက်ခြင်းယူသောသူ, နေ့နဲ့ည.
8:17 ထိုအခါငါလူသည်နေအောက်မှာပြုတော်မူသောဘုရားသခင်၏အပေါငျးတို့သသည်အကျင့်အဘို့အဘယ်သူမျှမရှင်းပြချက်ကိုရှာဖွေနိုင်သည်ကိုနားလည်ကြ. ဆိုတော့, သူရှာကြိုးစားအားထုတ်သောကပို, ဤမျှလောက်နည်းပါးသူကိုရှာဖွေပါဘူး. ဟုတ်ကဲ့, ပညာရှိတဲ့လူကိုသူသိတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်လျှင်ပင်, သူကရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်.
9:1 ငါသည်ငါ့နှလုံးမှတဆင့်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုရေးဆွဲခဲ့ကြ, ကျွန်မဂရုတစိုက်နားလည်အံ့သောငှါဒါ. ကိုယ့်ယောက်ျားအဖြစ်ပညာရှိတို့သည်ရှိပါတယ်, နှင့်သူတို့၏အကျင့်ကိုကျင့်သညျဘုရားသခငျ၏လက်တော်၌ရှိ. ထိုအသေးတစ်ဦးသည်လူသူမတ်ေတာ၏သို့မဟုတ်မုန်းတီးမှုခံထိုက်ပေ၏ရှိမရှိအဖြစ်ဤမျှလောက်မသိ.
9:2 ဒါပေမယ့်အနာဂတ်ကာလ၌ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမရေမရာရှိနေဆဲ, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအညီအမျှတရားမျှတရန်နှင့်မတရားသောသူတို့အတွက်မှဖြစ်ပျက်သောကွောငျ့, ကောင်းမွန်သောဖို့နဲ့မကောင်းတဲ့မှ, စင်ကြယ်သောရန်နှင့်ညစ်ညူးရန်, ယဇျပူဇျောသောသူတို့အဖို့နဲ့ယဇျပူဇျောမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့အား. ကောင်းမွန်သောဖြစ်သကဲ့သို့, ထိုနည်းတူအပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်. မုသားသက်သေခံမှုကျူးလွန်သောသူတို့အားကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ထိုနည်းတူအမှန်တရားမှကျိန်ဆိုသောသူဖြစ်ကြ၏.
9:3 ဤသည်နေအောက်မှာပြုလေသမျှသောအမှုအရာတို့တွင်အအလွန်ကြီးသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်ပါသည်: တူညီသောအရာတို့ကိုလူတိုင်းဖြစ်ပျက်ကြောင်း. နှင့်လူသားတို့၏နှလုံးသားများဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာ၌ငြိုးနှင့်မထီမဲ့မြင်နှင့်ပြည့်စုံကြသောအခါ, နောက်မှသူတို့ငရဲဆင်းဆွဲငင်ခံရကြလိမ့်မည်.
9:4 အစဉ်အမြဲတည်နေသောသူတယောက်မျှမရှိ, သို့မဟုတ်ပင်ဤကိစ်စတှငျယုံကြည်မှုရှိသူ. တစ်ဦးကလူနေမှုခွေးသေသောခြင်္သေ့ထက် သာ. ကောင်း၏.
9:5 အသက်ရှင်သောသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုသေဆုံးမည်ကိုငါသိ၏, သေးအမှန်တကယ်သေလွန်သောသူတို့သည်နောက်တဖန်အလျှင်းမသိရပါ, မဟုတ်သလိုသူတို့တွေမဆိုအကျိုးကိုမ. သူတို့အမှတ်ဉာဏ်မေ့လျော့သည်.
9:6 အလားတူပဲ, မေတ္တာနှင့်မုန်းတီးမှုနှင့်ငြူစူခြင်းအားလုံးအတူတကွဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြပြီ, မဟုတ်သလိုသူတို့ကဒီအသက်အရွယ်နှင့်နေရောင်အောက်၌ပြုရသောအမှုအမျိုးမျိုး၌မဆိုနေရာရှိသည်.
9:7 သို့ဖြစ်., ဝမ်းမြောက်နှင့်သင်၏မုန့်ကိုသွားစား, ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သင်၏စပျစ်ရည်ကိုမသောက်. သင်၏အကျင့်ကိုများအတွက်ဘုရားသခင်အားနှစ်သက်စေများမှာ.
9:8 သင်၏အဝတ်ခပ်သိမ်းသောကာလဖြူစင်ပါလေစေ, ရေနံနှင့်သင်၏ဦးခေါင်းကနေပျက်ကွက်မဖြစ်ပါစေ.
9:9 သငျသညျကိုခစျြတျောမူသောဇနီးနှင့်အတူဘဝကိုခံစားကြည့်ပါ, နေရောင်အောက်၌သင့်အားပေးခဲ့ကြရသောသင်၏အမသေချာမရေရာအသက်ရှည်သမျှနေ့ရက်ကာလကို, သင့်ရဲ့အချည်းနှီးသောအပေါငျးတို့သအချိန်ကာလအတွင်း. ဤဘဝ၌၎င်း, သင်၏အလုပ်သမား၌သင်တို့၏အဘို့ဖြစ်, နေရောင်အောက်တွင်အရာသငျသညျအလုပျသမားမြားနှငျ့.
9:10 မည်သို့ပင်သင်၏လက်ကိုလုပ်ဖို့နိုင်, စိတ်အားထက်သန်စွာလုပ်. အလုပ်မများအတွက်, မဟုတ်အကြောင်းပြချက်, မဟုတ်သလိုဉာဏ်ပညာကို, မဟုတ်ကိုသိသောဥာဏ်သည်သေခြင်း၌တည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်, သငျသညျပွေးသှားတာထားတဲ့ဆီသို့.
9:11 ငါသည်အခြားအရာဆီသို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်, ငါနေရောင်အောက်တွင်ကြောင်းကိုသိမြင်, ပြိုင်ပွဲလျင်မြန်မှမဟုတ်ပါဘူး, ခိုင်ခံ့သောမှမဟုတ်စစ်တိုက်ခြင်းငှါ, မဟုတ်ပေါင်မုန့်လိမ္မာသောသူထံ, မဟုတ်သူ၏စည်းစိမ်သင်ယူဖို့, မဟုတ်ကျေးဇူးတော်လိမ္မာသောရန်: ဒါပေမယ့်ထိုအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချိန်နှင့်တစ်ဦးအဆုံးလည်းမရှိ.
9:12 လူသည်မိမိအဆုံးကိုသိရပါဘူး. ဒါပေမယ့်, ငါးတစ်ချိတ်နှင့်အတူဖမ်းမိနေကြသည်နည်းတူ, ငှက်တစ်ကျော့ကွင်းနှင့်အတူဖမ်းမိနေကြတယ်, ဒါကြောင့်လူတို့သညျဒုစရိုကျအချိန်ဖမ်းဆီးရမိနေကြတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအမှတ်တမဲ့တိုက်လွှမ်းမိုးလိမ့်မည်သည့်အခါ.
9:13 ဤပညာ, ထိုနည်းတူ, နေအောက်၌ငါမြင်ကြပြီ, ငါအပြင်းအထန်ကလေ့လာခဲ့ကြ.
9:14 သေးငယ်တဲ့မြို့ရှိခဲ့သည်, အထဲတွင်အနည်းငယ်ယောက်ျားနှင့်အတူ. တစ်ဦးမဟာအရှင်မင်းကြီးကဆန့်ကျင်ရှိပါတယ် လာ. ,, ဘယ်သူဝိုင်းရံ, လူအပေါင်းတို့ကပတ်ပတ်လည်ခံတပ်တည်ဆောက်ခဲ့, နှင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းပြီးစီးခဲ့သည်.
9:15 ထိုသို့အတွင်းတွေ့ရှိရရှိခဲ့ပါသည်, ဆင်းရဲသားများနှင့်ပညာရှိသောသူသည်, မိမိပညာမှတဆင့်တမြို့လုံးလွတ်မြောက်လာ, အလျှင်းဆင်းရဲသားယောက်ျား၏ထိုနောက်မှမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်.
9:16 ဆိုတော့, ငါသည်ပညာတရားအားခွန်အားထက်ပိုကောင်းကြောင်းကြေညာ. ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုက, ထို့နောက်, ဆင်းရဲသောသူ၏ပညာမထီမဲ့မြင်နဲ့ကုသကြောင်း, နှင့်သူ၏စကားလိုက်နာကြသည်မဟုတ်?
9:17 ပညာရှိတို့၏စကားသည်တိတ်ဆိတ်စွာကြားသိနေကြ, ပိုပြီးဒါမိုက်မဲသောသူတို့တွင်တစ်မင်းသား၏အော်ဟစ်ထက်.
9:18 ပညာသည်စစ်လက်နက်ထက် သာ. ကောင်း၏. အကြင်သူသည်တဦးတည်းအရာအတွက်တော့လို့, ကောင်းတဲ့အရာအများကြီးဆုံးရှုံးကြလိမ့်မည်.
10:1 သေဆုံးယင်ကောင်နံ့သာ၏ချိုကိုဖျက်ဆီး. ဉာဏ်ပညာနှင့်ဘုန်းအသရေအကျဉ်းနှင့်ကန့်သတ်မိုက်မဲခြင်းထက် သာ. အဘိုး.
10:2 ပညာရှိတစ်ဦး၏နှလုံးသည်မိမိလက်ျာလက်၌ရှိ၏, ကာမိုက်မဲသောယောက်ျား၏နှလုံးသည်မိမိလက်ဝဲလက်၌ရှိ၏.
10:3 ထို့အပြင်, မိုက်သောသူလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေသည်အဖြစ်, သူသညျမိမိပညာမဲ့ပင်သော်လည်း, သူကလူတိုင်းကိုမိုက်မဲဖြစ်စဉ်းစား.
10:4 အခွင့်အာဏာရရှိထားသူတဲ့သူတစျဦး၏ဝိညာဉ်ကိုသင်ကျော်မြင့်တက်ခဲ့လျှင်, သင့်နေရာချန်မထားကြဘူး, သတိအကြီးမြတ်ဆုံးအပွစျကိုငြိမ်းစေမည်ဖြစ်သောကြောင့်.
10:5 နေအောက်၌ငါမြင်ကြပြီဖြစ်သောမကောင်းသောရှိပါတယ်, တစ်မင်းသား၏ထံတော်မှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်, အမှားအားဖြင့်ဆိုပါကအဖြစ်:
10:6 မြင့်မားသောဂုဏ်သိက္ခာကိုမှခန့်အပ်ထားသောမိုက်သောသူ, နှင့်ငွေရတတ်သောသူကသူ့ကိုအောက်ထိုင်နေစဉ်.
10:7 ငါသည်မြင်းပေါ်အစေခံကျွန်မြင်ကြပြီ, မှူးမတ်တို့သည်ကျွန်ကဲ့သို့မြေပြင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်.
10:8 အကြင်သူသည်တွင်းကိုတူးထဲသို့ကျလိမ့်မယ်. အကြင်သူသည်ဆိတ်ကွယ်ရာခြံမျက်ရည်, မြွေကသူ့ကိုကိုက်လိမ့်မယ်.
10:9 အကြင်သူသည်ကျောက်ခဲတို့ကိုပယ်ရှားသယ်ဆောင်သူတို့ကိုအားဖြင့်ထိခိုက်ပါလိမ့်မည်. အကြင်သူသည်သစ်ပင်များကိုဆင်းလျှော့ချသူတို့ကိုအားဖြင့်ဒဏ်ရာရလိမ့်မည်.
10:10 သံတုံးသည်ဆိုပါက, ထိုသို့မပြုမီကြောင်းလမ်းမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဒါပေမယ့်အများကြီးအလုပ်သမားများကမှိုင်းကိုဖန်ဆင်းထားသည်, ထို့နောက်သူကသွေးပါလိမ့်မည်. နှငျ့ဉာဏျပညာလုံ့လဝီရိယနောက်သို့လိုက်တတ်ပါလိမ့်မယ်.
10:11 အကြင်သူသည်လျှို့ဝှက်ချက်အတွက် slanders တိတ်တဆိတ်ကိုက်တဲ့မြွေထက်လျော့နည်းအချည်းနှီးဖြစ်၏.
10:12 ပညာရှိတစ်ဦး၏နှုတ်ကနေစကားများယဉ်များမှာ, ဒါပေမယ့်မိုက်ယောက်ျား၏နှုတ်ခမ်းအကြမ်းဖက်မှုများနှင့်အတူသူ့ကိုချပစ်ပါလိမ့်မယ်.
10:13 သူ၏စကားရဲ့အစမှာမိုက်မဲခြင်းဖြစ်၏, နှင့်သူ၏ဆွေးနွေးချက်၏အဆုံးမှာအများဆုံးကြမ်းတမ်းသောအမှားဖြစ်ပါသည်.
10:14 မိုက်သောသူသည်သူ၏စကားတို့ကိုများပြားစေ. လူသည်သူ့ရှေ့မှာခဲ့သောအရာကိုမသိ, သူ့ကိုအပြီးအနာဂတ်၌ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုအထံတော်သို့ထုတ်ဖေါ်နိုင်သူ?
10:16 သငျသညျမှမင်္ဂလာရှိ၏, အဘယ်သူ၏ရှင်ဘုရင်ကကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်ပြည်မှ, သူ၏မင်းသားတို့သည်နံနက်ယံ၌လောင်.
10:17 မင်္ဂလာအဘယ်သူ၏မင်းကြီးသည်မြင့်မြတ်သောဖြစ်ပါသည်မြေ, နှင့်သူ၏မှူးမတ်တို့သည်သင့်လျော်သောအချိန်တွင်အစာစား, လနျးဆနျးအတှကျမဟုတျဘဲ Self-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးအဘို့အ.
10:18 ပျင်းရိခြင်းအားဖြင့်, တစ်မူဘောင်နှိမ့်ချခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်, နှင့်လက်ဖြင့်အားနည်းခြင်းအားဖြင့်, အိမ်တအိမ်ကတဆင့်ပြိုကျရကြလိမ့်မည်.
10:19 ရယ်မောနေစဉ်, သူတို့မုန့်နှင့်စပျစ်ရည်ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, အသက်ရှင်သောစားသောက်စေခြင်းငှါဒါ. နှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပိုက်ဆံနာခံများမှာ.
10:20 သငျသညျရှငျဘုရငျကိုဆဲရေးတတ်မနေသင့်, ပင်သင်တို့၏အကြံအစည်အတွက်, သငျတို့သချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူကိုကဲ့ရဲ့မနေသင့်, ပင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အခန်း. လေထု၏ပင်ကိုငှက်ကသင်၏စကားသံကိုသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်များအတွက်, နှင့်အတောင်ပံသင့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုကြေညာပါလိမ့်မယ်ရှိပြီးသမျှ.
11:1 ရေကိုအပြေးကူးသင့်ရဲ့ပေါင်မုန့်သို့ကာစ်. အကြောင်းမူကား,, အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်, သငျသညျတဖနျတှေ့ရကြလိမ့်မည်.
11:2 ခုနစျပါးမှတစ်ဦးသောအဘို့ကို Give, နှင့်အမှန်တကယ်ပင်မှရှစ်. သငျသညျအနာဂတျမှာမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယ်အပြစ်မသိရပါဘူးများအတွက်.
11:3 မိုဃ်းတိမ်တို့ကိုဖြည့်ပြီဆိုပါက, သူတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာမိုဃ်းရွာစေသထွက်သွန်းလောင်းမည်. အပင်တစ်ပင်တောင်ဘက်ကျရောက်ခဲ့လျှင်, သို့မဟုတ်မြောက်ဘက်မှ, သို့မဟုတ်ပါကဆုံးစေခြင်းငှါသမျှညှနျကွားခ, အဲဒီမှာသူကကြွင်းစေရ.
11:4 အကြင်သူသည်လေတိုက်မှုစောင့်မျိုးစေ့ကိုကြဲမည်မဟုတ်. အကြင်သူသည်မိုဃ်းတိမ်တို့ကိုစဉ်းစားအသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
11:5 သငျသညျစိတျဓာတျ၏လမ်းမသိရအတူတူထုံးစံ၌, သွေ့ခြောက်သောအရိုးကိုယ်ဝန်ဆောင်သောမိန်းမများ၏ဝမ်း၌အတူတကွပူးပေါင်းဖြစ်ကြောင်းမလမ်း, ဒါကြောင့်သင်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့မသိရပါဘူး, လူအပေါင်းတို့၏ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုအဘယ်သူသည်.
11:6 မနက်ခင်းမှာ, သင်၏အမျိုးအနွယ်သည်မျိုးစေ့ကိုကြဲ, နှင့်ညဦးယံ၌, သင်၏လက်ကိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးမသွားပါစေပါဘူး. သငျသညျထစခွေငျးငှါဤအရာအရာမသိရပါဘူးများအတွက်, တသို့မဟုတ်အခြား. ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးအတူတကွထလျှင်, ဤမျှလောက်ပိုကောင်း.
11:7 အလင်းကိုသာယာသောဖြစ်ပါသည်, မျက်စိကိုနေရောင်ကိုတွေ့မြင်ရန်အဘို့အကကြည်နူးဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်.
11:8 လူတနှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်သည်ဆိုပါက, သူသည်ဤသူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့မူလျှင်, သူသည်မှောင်မိုက်ကာလ၏နေ့ရက်များစွာသတိရရမယ်, အရာ, သူတို့ရောက်ရှိလာကြပါပြီမည်သည့်အခါ, အနတ္တ၏အတိတ်ကိုအပြစ်တင်မည်ဟု.
11:9 သို့ဖြစ်., ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့, အိုလုလင်ကို, သင့်ရဲ့လူငယ်အတွက်, နှင့်သင်၏နှလုံးသည်သင်၏အသက်ငယ်သောကာလအတွင်းမှာကောင်းသောအရာကို၌တည်ကြကုန်အံ့. ထိုအခါသင်၏နှလုံးအနညျးလမျး၌ကျင်လည်, နှင့်သင့်မျက်စိ၏အမြင်နှင့်အတူ. ထိုသိ, ဤအရာအလုံးစုံကိုရည်မှတ်, ဘုရားသခင်စစ်ကြောရန်သင့်အားငါသက်ရောက်စေမည်.
11:10 သငျ့နှလုံးမှအမျက်ဒေါသ Remove, နှင့်သင်၏အသားကိုမှမကောင်းသောအဘေးဖယ်ထား. လူငယ်နှင့်ပျော်မွေ့သည်အချည်းနှီးသောများမှာ.
12:1 သင့်ရဲ့အသက်ငယ်သောကာလ၌သင်တို့၏ဖန်ဆင်းရှင်ကိုသတိရပါ, ဆငျးရဲခွငျး၏အချိန်ရောက်ရှိနှင့်အနှစ်ချဉ်းကပ်တော်ရှေ့မှာ, သငျသညျပွောဆိုလတံ့သောအကြောင်း, "ဒီအကြှနျုပျကိုနှစ်သက်ကြပါဘူး။ "
12:2 နေရောင်ခင်မှာ, နှင့်အလင်း, နှင့်လ, နှင့်ကြယ်တို့သည်မိုက်နှင့်မိုဃ်းရွာပြီးမှ,
12:3 ထိုအိမ်၏အုပ်ထိန်းသူများတုန်လှုပ်လိမ့်မည်သည့်အခါ, နှင့်အင်အားအကောင်းဆုံးယောက်ျားယိမျးယိုငျလိမျ့မညျ, စပါးကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်သောသူတို့သည်ပျင်းရိဖြစ်လိမ့်မည်, သေးငယ်တဲ့အရေအတွက် မှလွဲ., နှင့်သော့တဆင့်ကြည့်ရှုသောသူတို့အမိုက်လိမ့်မည်.
12:4 ထိုသူတို့ကလမ်းပေါ်မှာဖို့တံခါးတွေပိတ်ဖို့လိမ့်မည်, စပါးကလည်းရှေ့ဆက်နေဆဲတော်မူသောသူ၏စကားသံမ့်ဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ, နှင့်သူတို့တစ်တွေပျံအရာ၏အသံမှာနှောင့်အယှက်ဖြစ်လိမ့်မည်, နှင့်သီချင်းသမီးအပေါငျးတို့နားမကြားသူဖြစ်ရလိမ့်မည်.
12:5 အလားတူပဲ, သူတို့အထက်အရာတို့ကိုကြောက်ရွံ့ရိုသေဦးမည်, သူတို့သည်လမ်းကြောက်လိမ့်မည်. အဆိုပါဗာဒံသီးအပင်ကိုလန်းလိမ့်မည်; ကျိုင်းကောင်မွေးမြူပါလိမ့်မည်; နှင့် caper စက်ရုံအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်, လူသည်မိမိထာဝရ၏အိမျသို့သွားရကြမည်ဖြစ်သောကြောင့်, နှင့် လိုက်. ငိုကြွေးမြည်တမ်းလမ်းပေါ်မှာပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်ရကြလိမ့်မည်.
12:6 ငွေကြိုးကျိုးသည်ကိုမပြုမီ, နှင့်ရွှေတီးဝိုင်းကွာခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့, နှင့်အိုးစမ်းကျော်နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဘီးကိုမြေတွင်းအထက်ကျိုးသည်,
12:7 နှင့်ဖုန်မှုန့်ဟာသူ့ရဲ့မြေကြီးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ, ကဖြစ်ရာမှ, နှင့်ဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင့ပြန်လည်ရောက်ရှိ, ဘယ်သူခွင့်ပြု.
12:8 မိစ္ဆာဒိဌိများအချည်းနှီးသော, ဒေသနာကပြောပါတယ်, လူအပေါင်းတို့သည်အနတ္တဖြစ်၏!
12:9 ထိုအဒေသနာလိမ္မာခဲ့ကတည်းက, ထိုလူမျိုးကိုဆုံးမသွန်သင်, သူလိုပြည့်စုံခဲ့သောဘယျသို့ဖော်ပြထား. ထိုအရှာဖွေနေစဉ်, သူသည်အများသောဥပမာရေးစပ်.
12:10 သူအသုံးဝင်သောစကားလုံးများကိုရှာသောအခါ, သူအများဆုံးဖြောင့်မတ်စကားလုံးများကိုရေးသားခဲ့သည်, သမ္မာတရားကိုအပြည့်အဝရှိကြ၏ရာ.
12:11 ပညာရှိတို့၏စကားသည်တစ်ဦးတုတ်ချွန်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, နှင့်လက်သည်းများကဲ့သို့နက်ရှိုင်းစွာဆွဲထားကြ၏, အရာ, ဆရာ, ဆရာမများ၏ဆုံးမစကားကိုတစျဆငျ့, တဦးတည်းသင်းအုပ်ဆရာအားဖြင့်ဘွားသတ်မှတ်ထားကြသည်.
12:12 သင်ဤထက်မကပိုလိုအပ်သင့်ပါတယ်, ငါ၏သား. များစွာသောစာအုပ်တွေ၏ချမှတ်ခြင်းမရှိအဆုံးလည်းမရှိအဘို့. နှင့်အလွန်အကျွံလေ့လာမှုဇာတိပကတိအားဖြင့်တစ်ဦးခံရသောဆငျးရဲဖြစ်ပါသည်.
12:13 ကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့သည်ဟောပြောချက်၏အဆုံးအတူတကွနားထောင်ရန်ကြစို့. ကြောက်လန့်သညျဘုရားသခငျ, ပညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ခြင်းငှာ. ဤသူသညျအဘို့အရာရာကိုဖြစ်ပါသည်.
12:14 ဆိုတော့, ပြုသမျှတို့ကိုအဘို့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအမှားများအတွက်, ဘုရားသခငျသညျတရားသဖြင့်စီရင်ဆောင်ခဲ့ဦးမည်: ဒါဟာကောင်းသောသို့မဟုတ်ဒုစရိုက်ရှိမရှိ.